विदेशमा भाषण गरेरै करोडौं कमाउँछन्, नेपालमा त… – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > विदेशमा भाषण गरेरै करोडौं कमाउँछन्, नेपालमा त…
admin February 18, 2019 जीवनशैली	0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेश्वरजंग गहतराजको नाम निकै कमले सुनेका छन् । तर, उनी माओवादीका पुराना नेता हुन् । माओवादी जनयुद्धको सुरुवातमा ०५२ साल फागुन १ गते राति भएका चार आक्रमणमध्ये एउटामा गहतराज संलग्न थिए । उनको नेतृत्वमा रुकुमको राडीज्युला प्रहरी चौकीमा आक्रमण भएको थियो । त्यसपछि उनले कैयन आक्रमणमा मोर्चा सम्हालेका छन् ।
दलित समुदायका नेता भएपनि उनी आफूलाई कुनै जातीविशेषको प्रतिनिधि मान्दैनन् । यद्यपि, एउटा जातीय विभेदको एउटा सानो घटनालाई उनलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरेको थियो । गहतराजले आफ्नो राजनीतिक जीवनको वृतान्त यसरी अनलाइनखबरलाई सुनाए ।
आफ्नो साथीको नाम लिँदै मैले फलानो कहाँ छ भनेर शाहकी श्रीमतीलाई सोधेँ । उहाँ त एकाएक पड्किनुभयो । ‘तँ …. यस्तो भन्ने ? बक्स्योस भन्न तँलाई आउँदैन ?’ भन्दै च्याँठ्ठिनुभयो । ए, बक्सियोस भन्नुपर्ने ! भनेर ममा पनि इगो सुरु भयो ।
बाँसकोट, मुसिकोट र रुकुमकोट, तीनवटा रुकुमका प्रमुख राजनीतिक सेन्टर थिए । तीनवटै क्षेत्रमा शाहहरुको हैकम चल्थ्यो । मेरो गाउँ पञ्चायतका ‘राजा’ झैं थिए धु्रवविक्रम । नारायणहिटीमा बस्ने राजालाई भन्दा उहाँलाई धेरै मान्थे स्थानीयवासी । उहाँ पञ्चायतमा मन्त्री पनि हुनुभएको थियो ।
राजनीतिमा लाग्ने ध्येयका साथ तत्कालिन मोटो मसालको भातृ संगठन अनेरास्ववियुमा संगठित भएँ । त्यसको नेतृत्व थियो प्रचण्डको हातमा । ०४५ सालमा म अनेरास्ववियुको जिल्ला कोषाध्यक्ष भएँ । ०४६ सालमा चितवनमा राष्ट्रिय भेला भएको थियो । भेलामा भाग लिन आउँदा मैले पहिलोपटक गाडी चढेँ । रुकुमबाट हिँड्दै दाङसम्म र दाङदेखि चितवनसम्म गाडीमा यात्रा गरेको थिएँ । सो वर्ष जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनमा बिद्यार्थी हकहितका नारा लगाएर तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाइयो ।
रुकुम, होलेरी, सिन्धुपाल्चोक र गोरखामा एक/एक वटा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी त्यहाँका हातहतियार÷गोली गट्ठा नियन्त्रणमा लिएर जनयुद्धको थालनी भयो । जसमध्ये एउटा मेरो इलाकाको थियो, राडीज्युला प्रहरी चौकी ।
जनयुद्ध सुरु भएको एक वर्ष पछाडि मेरो विवाह भयो–अन्तरजातीय । आफ्नै गाविसभित्रकी पार्टीमै लाग्नुभएकी पार्वती पुन (उशासँग) आफूखुशी बिहे गरियो । बिहेपछि उनको घरमा एक्लै गएँ । बुबा (ससुरा) ले चिन्नु भएको थियो तर, सासुले चिन्नुभएको थिएन । मैले भनेँ–‘म हजुरको छोरीको श्रीमान ।
हाम्रो बिहे भएको सुनेपछि रिसाउनुभएको थियो रे । तर, म आफैँ गएपछि सहजै स्वीकार्नुभयो । त्यसो भएपछि समाज बदलियो है भन्ने अनुभुत भयो । मलाई सुरु देखि नै डर/त्रास थिएन । पटक–पटक पार्टीमा आलोचना खेप्नुपरेको विषय, ‘धेरै खुला नहुनुस् है’ भन्ने थियो । ‘धेरै खुला हुँदा क्षती हुन सक्छ है’ भन्ने खालका सुझाव आउँथे । तर, मलाई जनतासँग किन लुक्ने भन्ने लाग्थ्यो ।
जनयुद्धकै बीचमा–बीचमा म पार्टीको जिल्ला सचिव भएँ । तत्कालिन राज्य हामीलाई सिध्याउन लागिराखेको थियो । त्यो परिस्थितिमा ३ वर्षजति काम गर्दा एक वर्ष जिल्ला इन्चार्ज भएँ । ०५७ सालमा म पढेकै विद्यालयमा कार्यक्रम गरी हजारौं जनताको बीचमा जनसरकार घोषणा गर्‍यौं । त्यो देशकै पहिलो जनसरकार थियो । म जनसरकार उपप्रमुख भएँ, पूर्ण घर्ती प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ (पूर्ण घर्ती) ५ नम्बर प्रदेशको सभामुख हुनुहुन्छ ।
०५८ सालमा पार्टीले रुकुमबाट कर्णाली खटायो । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट जिल्लाको इन्चार्ज भएर म एक वर्ष कर्णाली बसेँ । त्यसपछि तराई झरेँ बाँके, बर्दिया र सुर्खेत हेर्ने गरेर । पार्टीको केन्द्रिय समितिमा पनि थिएँ । त्यसबेला रणनीति तय गरियो–राज्य व्यवस्थालाई हाम्रा आधार क्षेत्रहरुमा जान नदिने ।
१२बुँदे सहमति भइसकेपछि जनआन्दोलनको आधार तयार गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले बाँके÷बर्दियामा नेकपा माओवादी र स्थानीय सात राजनीतिक दलका बीचमा चारबुँदे सम्झौता गरियो । त्यसबेला काठमाडौंमा जुन स्तरको आन्दोलन उठेको थियो, त्यस्तै स्तरमा बाँके-बर्दियामा हामीले गर्‍यौं ।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टीको स्कुलिङ थियो–मनमा विद्रोह र मुखमा संविधानसभा निर्वाचनको नारा । जनता र संगठनलाई परिचालन गर्न सक्ने ठूलो पङ्ती निर्वाचनको प्रक्रियाभन्दा बाहिर रह्यो । असमझदारी भएर होइन कि तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले निर्वाचन नै गर्न दिँदैन र त्यो अवस्थामा फेरि आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने आँकलनमा । पार्टीको यो खालको निर्देशन भएकाले ०६४ मा म पनि उम्मेदवार नभई बाहिर बसेँ । नेत्रविक्रम चन्द, शक्ति बस्नेत लगायतका धेरै नेताहरु उम्मेदवार हुनुभएन ।
०४६ देखि ०५२ माघ २६ गतेसम्म म जनयुद्धको आवश्यकताबारे भाषण गर्दै हिड्थेँ । एउटा प्रखर वक्ताको रुपमा चिनिन्थेँ । जनयुद्ध औपचारिक रुपमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि अन्तिमपटक माघ २६ गते खलंगामा भाषण गरेको थिएँ ।
गरिवि, अभाव र विपन्नताबाट समाजवाद/साम्यवाद आउँदैन । समाजवाद-साम्यवाद समृद्धि हासिल गरेर आउने हो । यति मात्रै फरक हो, समाजवादी व्यवस्थाले सबैलाई समृद्ध बनाउँछ । अहिले अभ्यास गरिरहेको व्यवस्थाले एउटा वर्गलाई पुराका पुरा समृद्ध बनाउँछ र अर्को वर्गको आधारभुत रुपले मात्रै हित गर्छ । यसले विभेद भएर फेरि आन्दोलनका संभावना बचाइराख्छ ।
ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ले फाइदा
मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा संस्कृति स्थापित गर्न खोजेको छु । हरेक महिना मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा दुईपटक अनिवार्य जान्छु । ३÷४ चोटिसम्म पनि पुगेको हुन्छु ।
मेरो जिल्लामा तटबन्धको ठूलो समस्या छ । उर्जामन्त्री आफैँ पुगेर सबै हुर्नभएको छ । त्यो टोलीमा नीति निर्माण तहका व्यक्तित्वहरु पनि भएकाले भन्नलाई सजिलो भयो ।
कसैको दया–माया भएर, फलानो जाति, क्षेत्रको भएर आएको पनि होइन । प्रतिस्पर्धा गरेर, पुरै पार्टीभित्र भन्दा अलिक बढी गरेर आएको हुनाले पनि यस्तो लाग्छ ।
अर्कोतर्फ, बुझेर नबुझेर नेपालमा नेताहरुको भाषण सस्तो छ । तपाईं प्रमुख अतिथि भएर आउनु पर्‍यो है भन्छन् । कोशिस गर्छु भन्यो । भोलिपल्ट फेरि फोन आउँछ– अलिकति सहयोग गर्नुपर्‍यो कार्यक्रममा ।
नेपाली राजनेताहरुको भाषण त सस्तो भयो । आफैँ व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने, कार्यक्रम समेतको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने । महोत्सवहरु हुन्छ –तपाईंले भनिदिनुपर्‍यो, अलिकति थपिदिन्छन् कि भन्छन् । यस्तो स्थिति छ ।
(सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद महेश्वरजंग गहतराजसँग रघुनाथ बजगाँईले गरेको कुराकानीमा आधारित) अनलाइनखबर डटकमबाट साभार गरिएकाे ।
हेल्मेट नपाएपछि यी महिलाले लागाइन् यस्तो जुक्ति… हेरेपछि छक्क पर्नुहुनेछ…